- NCA ရဲ့စံတန်ဖိုးတွေကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားပေမယ့် စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ - ရေဦးတွင် ကင်းလှည့်ရဲကား တိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် ရဲ ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ။ - တယ်လီနောက သူရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို လက်ဘနွန်ကုမ္ပဏီ M1 Group ကိုရောင်းချ။ #dvbtvnews #SpringRevolution #WhatIsHappeningInMyanmar DVB TV - 08 07 2021
- ရေဦးတွင် ကင်းလှည့်ရဲကား တိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် ရဲ ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ။ - ကလေးဝမြို့တွင် ကိုဗစ် ကူးစက်မှုများလာသဖြင့် စာသင်ကျောင်းနှင့်ဈေးဆိုင်များ ပိတ်ထား။ - ဆောမြို့နယ် စစ်ရှောင်စခန်းက ဆိုင်ကယ်များ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ။ #dvbtvnews #SpringRevolution #WhatIsHappeningInMyanmar DVB TV - 08 07 2021
- ငါန်းဇွန်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၁၇ ဦး တွေ့ရှိ။ - ရေးမြို့နယ် ပျူစောထီးအဖွဲ့ဝင် နေအိမ် ဗုံးကွဲ၊ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ။ - ဖားကန့်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်များ ခြေလျင်ချီတက်လာစဉ် မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရ။ #DVBTV #Afternoon #NewsBreak #Live DVB TV - 07 07 2021
- ကလေးမြို့မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၄၀၀ နီးပါးရှိလာ။ - ကိုဗစ်အခြေအနေပိုဆိုးလာရင် မြေပြင်သပိတ်ကို ပုံစံပြောင်းလုပ်မယ်။ - တော်လှန်ရေးအောင်မြင်အောင်တိုက်ဖို့ ကယားပြည်က စစ်ရှောင်တွေ တိုက်တွန်း။ #DVBTV #Daily #News DVB TV - 06 07 2021
- ဆဲဗင်းဂျူလိုင်စိတ်နဲ့ အာဏာရှင်ကို အမြစ်ပြတ် တိုက်ထုတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်း - ဒီမောဆိုမြို့နယ်က စစ်ရှောင်တွေ အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါး အကူအညီလိုအပ်။ - စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့် ကျဆုံးပြည်သူ ၈၉၄ ယောက်ရှိလာ။ #dvbtvnews #SpringRevolution #WhatIsHappeningInMyanmar DVB TV - 07 07 2021
#gusttavolima #dennis ❤Inscreva-se no canaledeixe o seu like❤ ⚠ ATENÇÃO: Todo conteúdo vinculado no vídeo acima sendo imagens ou vídeos tem o intuito de passar informação dos famosos(que são pessoas totalmente publicas) para seus fãs. Qualquer material aqui colocado nos vídeos sendo vídeos ou imagens que contenha direitos autorais que afeteaqualquer um dos mostrados no vídeo acima, por favor entre em contato comigo que pelo e-mail thiagofelix7@gmail.com que iremos remover o mais rápido possível. Obrigado pela compreensão!
Please watch latest Ghumta Hua Aaina- https://www.youtube.com/watch?v=kpw4ysAOmIA&t=17s News of the week | इतना झूठ क्यों बोलते हैं PM Modi ? amit shah | #GHA | #DBLIVE | #HindiNews | #BreakingNews | #Watch | #video | news of the week,newsweek,amit shah,modi amit shah,narendra modi, modi in ramlila maidan, modi on nrc, modi on detention centre, citizenship amendment bill 2019,citizenship bill,indian citizenship act,indian constitution,rahul gandhi,amit shah speech on citizenship,amit in lok sabha,rajya sabha,indian parliament,rahat indori,ghumta hua aaina,news,hindi news,db live,news live,news today,news india,dblive,db news,latest news,db live ki report, bashir badr DB LIVE APP : https://play.google.com/store/apps/details?id=dblive.tv.news.dblivetv.com DB LIVE TV : http://dblive.tv/ SUBSCRIBE TO OUR CHANNEL: https://www.youtube.com/channel/UCBbpLKJLhIbDd_wX4ubU_Cw DESHBANDHU : http://www.deshbandhu.co.in/ FACEBOOK : https://www.facebook.com/DBlivenews/ TWITTER : https://twitter.com/dblive15 ENTERTAINMENT LIVE : https://www.youtube.com/channel/UCyX4qQhpz8WQP2Iu7jzHGFQ Sports Live : https://www.youtube.com/channel/UCHgCkbxlMRgMrjUtvMmBojg
- ကောလင်း PDF နှင့် KIA ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကား ၂ စီးမီးလောင်၊ အများအပြား ဒဏ်ရာရ။ - မွန်ပြည်နယ်တွင် တစ်ရက်တည်း ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၁၂၅ ဦးတွေ့ရှိ၊ ၁ ဦး သေဆုံး။ - ကျောက်မဲတွင် မြေပြိုကျပြီး ကျင်းအငှားလိုက်တူးသည့် လူငယ် ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ။ #dvbtvnews #SpringRevolution #WhatIsHappeningInMyanmar DVB TV - 05 07 2021
- ကလေးဝမြို့နယ်တွင် CDM သူနာပြုဆရာမ ၁ ဦးဖမ်းဆီးခံရ။ - အာဏာသိမ်းရက်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်အတွင်း ကျဆုံးပြည်သူ ၈၈၈ ဦးရှိလာ။ - နွေဦးတော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းများအတွက် တိုကျိုမြို့မှာ ဆုတောင်းပွဲလုပ်။ #DVBTV #Daily #News DVB TV - 03 07 2021
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ညနေခင်း သတင်းများ (DVB TV 08.07.2021 Evening News)
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ၈ ရက် ဇူလိုင်လ နေ့လည်ခင်း သတင်းများ
DVB - ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ၇ ရက် ဇူလိုင်လ နေ့လည်ခင်း သတင်းများ
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ညနေခင်း သတင်းများ (DVB TV 06.0.2021 Evening News)
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ဒီနေ့ သတင်းများ (၇ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၂၁)
Gusttavo Lima participa da gravação do DVD com Dennis em Goiânia
Please watch latest Ghumta Hua Aaina- https://www.youtube.com/watch?v=kpw4ysAOmIA&t=17s News of the week | इतना झूठ क्यों बोलते हैं PM Modi ? amit shah | #GHA | #DBLIVE | #HindiNews | #BreakingNews | #Watch | #video | news of the week,newsweek,amit shah,modi amit shah,narendra modi, modi in ramlila maidan, modi on nrc, modi on detention centre, citizenship amendment bill 2019,citizenship bill,indian citizenship act,indian constitution,rahul gandhi,amit shah speech on citizenship,amit in lok sabha,rajya sabha,indian parliament,rahat indori,ghumta hua aaina,news,hindi news,db live,news live,news today,news india,dblive,db news,latest news,db live ki report, bashir badr DB LIVE APP : https://play.google.com/store/apps/details?id=dblive.tv.news.dblivetv.com DB LIVE TV : http://dblive.tv/ ...
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ညနေခင်း သတင်းများ (DVB TV 05.07.2021 Evening News)
DVB - ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ မနက်ခင်း သတင်းများ (၃ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၂၁)
- NCA ရဲ့စံတန်ဖိုးတွေကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားပေမယ့် စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ - ရေဦးတွင် ကင်းလှည့်ရဲကား တိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် ရဲ ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ။ ...
- ရေဦးတွင် ကင်းလှည့်ရဲကား တိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် ရဲ ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ။ - ကလေးဝမြို့တွင် ကိုဗစ် ကူးစက်မှုများလာသဖြင့် စာသင်ကျောင်းနှင့်ဈေးဆိုင်များ ပိတ်ထား။ - ...
- ငါန်းဇွန်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၁၇ ဦး တွေ့ရှိ။ - ရေးမြို့နယ် ပျူစောထီးအဖွဲ့ဝင် နေအိမ် ဗုံးကွဲ၊ ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ။ - ဖားကန့်တွင် စစ်ကောင်စီတပ်များ ခြေလျင်ချီတက်လ...
- ကလေးမြို့မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၄၀၀ နီးပါးရှိလာ။ - ကိုဗစ်အခြေအနေပိုဆိုးလာရင် မြေပြင်သပိတ်ကို ပုံစံပြောင်းလုပ်မယ်။ - တော်လှန်ရေးအောင်မြင်အောင်တိုက်ဖို့ ကယာ...
- ဆဲဗင်းဂျူလိုင်စိတ်နဲ့ အာဏာရှင်ကို အမြစ်ပြတ် တိုက်ထုတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်း - ဒီမောဆိုမြို့နယ်က စစ်ရှောင်တွေ အစားအစာနဲ့ ဆေးဝါး အကူအညီလိုအပ်။ - စစ်တပ်က ပစ်ခတ်သတ်ဖြ...
#gusttavolima #dennis ❤Inscreva-se no canaledeixe o seu like❤ ⚠ ATENÇÃO: Todo conteúdo vinculado no vídeo acima sendo imagens ou vídeos tem o intuito de passa...
Please watch latest Ghumta Hua Aaina- https://www.youtube.com/watch?v=kpw4ysAOmIA&t=17s News of the week | इतना झूठ क्यों बोलते हैं PM Modi ? amit shah | #GHA ...
- ကောလင်း PDF နှင့် KIA ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကား ၂ စီးမီးလောင်၊ အများအပြား ဒဏ်ရာရ။ - မွန်ပြည်နယ်တွင် တစ်ရက်တည်း ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၁၂၅ ဦးတွေ့ရှိ၊...
- ကလေးဝမြို့နယ်တွင် CDM သူနာပြုဆရာမ ၁ ဦးဖမ်းဆီးခံရ။ - အာဏာသိမ်းရက်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်အတွင်း ကျဆုံးပြည်သူ ၈၈၈ ဦးရှိလာ။ - နွေဦးတော်လှန်ရေး သူရဲကောင်းများအတွက် တိုကျိ...
- NCA ရဲ့စံတန်ဖိုးတွေကို ဆက်လက်ကိုင်စွဲထားပေမယ့် စစ်ကောင်စီနဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ - ရ...
- ရေဦးတွင် ကင်းလှည့်ရဲကား တိုက်ခိုက်ခံရသဖြင့် ရဲ ၁ ဦးသေဆုံး၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရ။ - ကလေးဝမြို့တွင် ...
- ငါန်းဇွန်တွင် ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၁၇ ဦး တွေ့ရှိ။ - ရေးမြို့နယ် ပျူစောထီးအဖွဲ့ဝင် နေအိမ...
- ကလေးမြို့မှာ ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၄၀၀ နီးပါးရှိလာ။ - ကိုဗစ်အခြေအနေပိုဆိုးလာရင် မြေပြင်...
- ဆဲဗင်းဂျူလိုင်စိတ်နဲ့ အာဏာရှင်ကို အမြစ်ပြတ် တိုက်ထုတ်ကြဖို့ တိုက်တွန်း - ဒီမောဆိုမြို့န...
#gusttavolima #dennis ❤Inscreva-se no canaledeixe o seu like❤ ⚠ ATENÇÃO: Todo conteúdo v...
Please watch latest Ghumta Hua Aaina- https://www.youtube.com/watch?v=kpw4ysAOmIA&t=17s N...
- ကောလင်း PDF နှင့် KIA ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် စစ်ကား ၂ စီးမီးလောင်၊ အများအပြား ဒဏ်...
- ကလေးဝမြို့နယ်တွင် CDM သူနာပြုဆရာမ ၁ ဦးဖမ်းဆီးခံရ။ - အာဏာသိမ်းရက်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်အတွင်း က...
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ညနေခင်း သတင်းများ (DVB TV 08.07.202...
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ၈ ရက် ဇူလိုင်လ နေ့လည်ခင်း သတင်းများ...
DVB - ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ၇ ရက် ဇူလိုင်လ နေ့လည်ခင်း သတင...
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ညနေခင်း သတင်းများ (DVB TV 06.0.2021...
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ဒီနေ့ သတင်းများ (၇ ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၂...
Gusttavo Lima participa da gravação do DVD com Den...
News of the week | इतना झूठ क्यों बोलते हैं PM Mod...
RFA Burmese လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ Live Stream...
ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ညနေခင်း သတင်းများ (DVB TV 05.07.202...
DVB - ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ မနက်ခင်း သတင်းများ (၃ ရက် ဇူလ...